कतिसम्म तपाईको मदिरा पिउने बानी छ ? यस्तो छ कलेजोमा मदिराको प्रभाव - जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
विषक्त अल्कोहलको सेवनले ज्यान जानसक्ने हुदाँ यसारे विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी छ । अलमलिनु, निरन्तर वान्ता हुनु, सास फेर्नमा कठिनाई हुनु, रक्तचाप न्युन हुन, , अनुहार निलो हुनु विषाक्त अल्कोहल सेवनको लक्षण हो । यदी कसैमा यस्तो लक्षण देखिए उनीहरुमा डिहाइडे्रसन तथा मस्तिष्कघात हुने खतरा बढ्छ । यस्तोमा तुरुन्त चिकित्सकका जानुपर्छ ।
Don't Miss it के तपईलाई मुटुको रोग छ ? मुटु रोगीले कस्तो खाना खानुपर्दछ ? जानीराखौ
Up Next तपाईको बढी दुध पिउने बानी छ कि दहि ? स्वास्थ्यका लागी कुन बढी फाइदाजनक ? थाहापाउनुहोस्